Booliska Netherland oo Xiray Gabar Soomaali ah – Radio Daljir
Diseembar 13, 2015 1:36 b 0
Somalia, December 13, 2015-(Daljir)_Gabadhaasi oo deggan magaalladda Sittard ayaa lagu tuhunsan yahay inay ku lug leedahay Kooxaha loogu yeero Argagixisadda.
Waaxda Dacwad-oogayaasha dalkaasi ayaa sheegtay in gabadhaasi oo 15 jir ah lagu soo hayn doono Xabsiga, kadib, markii ay kaga shakiyeen inay gabadha xubin ka tahay Urur Dembiilayaal leyihiin oo qorsheynayey inay geystaan Weeraro Argagixiso.
Warbaahinta RTL ayaa sheegtay in gabadha la sii daayey, maadaama aysan qaan-gaarin, balse lala soconayo dhaqdhaqaaqeeda.
Dacwad-oogayaasha ayaa sheegay inay Rafcaan ka qaadan doonaan sii-daysamadeeda, iyagoo sheegay inay ku lug leedahay xaallado khatar ah.
Gabadhaasi oo aan magaceeda lagu soo koobay Rahma E., ayaa la sheegay inay Boliska dalka Holland markii ugu horreysay horey u qabteen bishii September 3-dii ee sannadkan. inkastoo labo isbuuc kadib la sii daayey.
Wargeyska The Telegaraf ee ka soo baxa Holland ayaa qoray inay gabadhaasi oo asalkeedu Somali yahay inay hooyadeeda iyo walaalkeeda kula nooshahay magaalladda Sittard oo ku taalla Gobalka Limburg ee Koonfurta dalka Holland.